Mareykanka oo Ismaaciil C. Geele ku cadaadinaya inuu talaabo ka qaado Maxamed Aw-Siciid | Radio Hormuud
Mareykanka oo Ismaaciil C. Geele ku cadaadinaya inuu talaabo ka qaado Maxamed Aw-Siciid
Wargeyska The Indian Ocean, ayaa sheegay in Sirdoonka Maraykanku eedo culus ku soo oogeen ganacsade Maxamed Aw Siciid Geeddi oo ah Madaxa shirkada isgaadhsiinta ee Somcable ,
Cadadka Wargeyska ee soo baxay 31-August, waxa lagu sheegay in Maxamed Aw-Siciid uu dhex fadhiyo eedaymo culus oo ku saabsan ka ganacsiga hub sharcidaro ah. “.Sida uu sheegay Sirdoonka Maraykanku waxay dawladda Jabuuti uga digeen dhaq-dhaqaaqyada sharci darrada ah ee ganacsadahan reer Somaliland ee Shirkaddiisa ay saamiga ku leedahay Marwada koowaad ee Jabuuti Khadra Maxamuud Xayd iyo marwada Madaxweynahii hore ee SomalilandAamina Maxamuud Jirde.
warku waxa uu intaas ku darayaa in madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle si qayaxan looga codsadey in uu si aan habsan lahayn wax uga qabto dhibaatadan,”. Sida lagu xusay warbixinta Wargeyska The Indian Ocean.
Wargeysku wuxuu intaas ku daray in arrintani dhaawacday sawirka ama sumcadda ganacsade Maxamed aw Siciid Geeddi ku leeyahay Jabuuti iyo sidoo kale xidhiidhka uu la leeyahay Marwada koowaad Khadra Maxamuuud Xayd.
Waxaanay warbixintu intaas ku dartey in Ameerikaanku sheegeen in ay caddayn u hayaan eedaha ay ku soo oogeen ganacsade Ina Aw-Siciid.
Warbixntu intaas kagamey hadhin ee waxey sii raacisay in ganacsade Maxamed Aw Siciid meesha uu gabaad ka dhiganayaa noqon doonto Somaliland si la mid ah sidii uu yeelay Axmed Cismaan Geelle, madaxa shirkadda SBI oo sanadkii 2017 dawladda Jabuuti u jartay waaran lagu soo qabanayo markii khilaaf soo kala dhex galay Jabuuti.
Wargeysku wuxuu leeyahay in haddii eedahan cusub rumooban uu ganacsiga Ina Aw Siciid halis galidoono.
wargeysku waxa uu sheegay in ganacsadahan oo bahwadaag la yahay Dahabshiil dhawaana uu dhammaystirayo xadhigga Febric Optic ee Jabuuti iyo Somaliland, islamarkaana Berbera ka dhisayo xarun weyn oo dhanka isgaadhsiinta ah siiba xadhigga isgaadhsiinta ee badda hoosteeda mara.